China ụlọ ọrụ Aluminom na-arụ ọrụ nchekwa ụlọ na ndị na-emepụta | En hụrụ
(1) Njirimara Nkọwapụta Aluminium Nke dị elu-na-eme ntụ ntụ mkpuchi
(3) Igwe Ọdụdọ zuru oke Nkem, 6mm + 12Ar + 6mm, mkpuchi dị ala, Argon gas jupụtara, Technoform-TGI-Composite Advanced Warm-Edge Spacer.
(4) Top Quality Italy Brand Ngwaọrụ dị egwu maka ngwa na ngwa mma.
(5) Scly Scly Screens
FOEN D93 aluminuium bifold door system na-enye usoro zuru oke maka ụlọ ahụ; A na-emechi mpempe roba atọ, na etiti roba dị n'etiti na-enye egwuregwu zuru oke na ọrụ nke ụkpụrụ mmiri ozuzo, nke mere na ngwaahịa ahụ nwere ezigbo ikuku na arụmọrụ mmiri.Higher metal ibu nwere ike ịghọta mmeghe nke nnukwu akụkụ, dị mfe iji gboo mkpa nke ụlọ dị iche iche; Nhazi ihe eji achọ mma n’èzí na-emekwa ka ọdịdị ụlọ ahụ dịkwuo mfe ma mara mma, dabara adaba maka ọrụ etiti na elu-elu.
Obosara nkata: 78mm
Obosara elu: 93mm
Mpempe ụzọ glide: 93mm
2. Iko: Oke iko iko kachasị dị 39mm
3. Ogwe ngwaike: oghere pụrụ iche
4. Mepee mpempe akwụkwọ: Ọnụ ụzọ
5. formancerụ Ọrụ
Uko mmiri: Klas 6, GB / T7106-2008
Nko ikuku: Klas 7, GB / T7106-2008
Ihu ikuku iguzogide 4.6kPa, GB / T7106-2008 klas 8
Insuda mkpuchi: Rw (C; 35 (Ctr) = 2; - 5) dB, larịị 3 GB / T7106-2008
6.Nke a zuru oke zụrụ ahịa na-eji, agbanyeghị, mgbe ị gbakọtara, ị ga-ahụ na o ruru oke nke ahụ.
Ndi ana - akpo FOEN n’ohere nari puku nari ise na iri ise na puku iri ano nari puku nari ise na puku ise, ndi ulo oru 3 nke ulo a, Fujian FOEN Aluminium Mmere Obodo, ndi mmadu nwere puku isii na Puku asaa na narị puku asaa. Henan FOEN Aluminom Mmeputa obodo, na-ekpuchi mpaghara metrik puku narị anọ. Fujian FOEN Akụrụngwa na-emepụta igwe anaghị agba nchara, Ekpuchi mpaghara nke otu narị naịra atọ na iri atọ na ise, Isi ụlọ ọrụ na fuzhou obodo, Ekpuchi mpaghara nke otu narị mita na iri atọ na ise, na ụlọakwụkwọ 2, FOEN Window Institute na FOEN Window Institute. , Dabere na ụlọ ọrụ nyocha & mmepe nke ọkachamara, windo na ibo ụzọ FOEN nwere ike ịdị mma maka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, ihe ndị eji eme ihe na ihe ndị chọrọ. Nrụpụta dị elu: Nchịkwa ikuku 8 na -emechi nguzogide 7 ikuku ike Igwe 4 mmachi mmiri Henweta mkpuchi K darajar 2.0 ruo 0.8 Super ụda mkpuchi mkpuchi Mgbo anwụ na-egbochi Mpụ anwụ anwụ na - egbochi Mpụ anwụ anwụ.
Banyere usoro mmepụta, anyị webatara ihe ihe ndozi CNC ihe ngbanye 50, Nchịkwa anyị na-akpụ akpụ kwa afọ karịa puku iri na ise na -eme ka mmebe ọhụụ na-agbanwe ma dịkwa ọsọ.
Maka mmalite nke mbido, anyị na-eji A00 aluminom ingots dị ọcha nke ịdị ọcha na-erughị 99.
Anyi nwere ndi okacha mara nke ndi n’ile nyocha ha. n’ikpeazụ onye isi injin bịanyere aka na nyocha nke ụdị ahụ, n’ụdị, na-enyocha ihe mejupụtara kemịkalụ (A na-eji profaịlụ A00 dị ọcha aluminiọn dị ọcha) abụghị ihe na-erughi 99, Akzo Nobel Power the paint paint kasị ukwuu n’ụwa ji ntụ ntụ. A na-eji Nippon Paint onye na-emepụta ihe eji eme ihe agba n'ụwa na ọgwụgwọ electrophoresis Ọ bụrụ na arụ ọrụ ule, ọ bụ naanị ngwaahịa ndị ruru eru ka a ga-ebupu. Ọ bụ ya mere anyị na-ekwe nkwa mgbe niile na anyị nwere afọ 32.
Nke gara aga: Sisiike windo FOEN Smart4-FOEN J100
Osote: Alumini Ileba orzọ
Alumini ndi nnochi uzo
Aluminium N'ihe na-emechi mkpuchi ụzọ
Sistem Window Smart FOEN 5-FOEN J168 atọ…
6063 T5 T Slot Track Industrial Aluminom Extrus ...
Profaịlụ Industrial kachasị mma nke Aluminom mere site na C ...
Profaịlụ Ọrụ Aluminom Dị Elu nke Cu ...